हाम्रो बारेमा - हाजिंग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (शंघाई) कं, लिमिटेड
२० वर्ष काम गर्ने अनुभव
हाजिंग अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिंग २०२० मा स्थापित भएको थियो। हाम्रो कारखाना २०० 2003 मा स्थापित भएको थियो। हामीसंग शंघाई र झेजियांगमा दुईवटा स्वामित्वका कारखानाहरू छन्। यो एक मास्क उत्पादन उपकरण समाधान प्रदायक हो जुन विश्वभरिका ग्राहकहरूलाई उच्च-गुणवत्ता समाधान प्रदान गर्न समर्पित छ।
हामीसँग हाल १ 180० कर्मचारी छन्, R० आर एन्ड डी र प्राविधिक कर्मचारीहरू सहित। वर्षौंको कडा परिश्रम पछि, कम्पनीको १०० भन्दा बढी पेटेन्ट छ र शंघाईको स Song्गजिj जिल्ला सरकारले समर्थन गरेको एक उच्च टेक उद्यम भएको छ।
२०२० देखि सुरू गर्दै, हाजिंगले घरेलु व्यापारबाट विदेशी व्यापारमा स्विच गर्दछ, र फ्ल्याट मास्क मेशिन, एन 95 mas मास्क मेशिन र कप मास्क मेशिन, आदि सहित सामान्य वातावरण अन्तर्गत मास्क मेशीन उपकरण उत्पादन गर्न सुरु गर्दछ, र हामी पनि ग्राहक अनुसार कच्चा माल प्रदान गर्दछौं। आवश्यकताहरू, गैर बुनेका कपडा सहित, मेल्टब्लोउन कपडा, नाक पट्टी र कान डोरी, इत्यादि। त्यस्तै ११ विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू छन्, पूर्ण रूपले स्वचालित र अर्ध-स्वचालित उत्पादन लाइनहरू सहित।
हाम्रो उत्पादन प्रकारहरू पूर्ण छन्, जसले ग्राहकहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ, मास्क उत्पादनको लागि कच्चा माल सहित, हामी प्रदान गर्न सक्दछौं। धेरै उत्पादनहरू र प्रविधिहरूले राष्ट्रिय पेटेन्टहरू लिएका छन् र सीई अनुमोदन प्राप्त गरेका छन्।
एक बर्षको विकास पछि, हाम्रो उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, स्पेन, मेक्सिको, पाकिस्तान र दक्षिण कोरियामा बेचिएको छ। सबै हाम्रो उत्पादनहरूको परीक्षण र शिपमेंट अघि भिडियो शट हुनेछ, र उपकरण सुनिश्चित गर्नका लागि जंग विरोधी उपचार हुनेछ। कि ग्राहकहरु हाम्रो उपकरणहरु राम्रो उपयोग गर्न सक्दछन्।
अनुप्रयोगहरूमा स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, खाद्य उद्योग, सौन्दर्य देखभाल र औद्योगिक वातावरण, आदि समावेश छन्।
हाउजिंग एन 95 mas मास्क मेशिन, फ्ल्याट मास्क मेशिन, कप मास्क मेशिन, KF94 मास्क मेशिन र डकबिल मास्क मेशिनको उत्पादन, विकास र बिक्रीमा माहिर छ। त्यहाँ ११ बिभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू छन्, पूर्ण स्वचालित र अर्ध-स्वचालित उत्पादन लाइनहरू सहित।
हामीसँग production उत्पादन कार्यशाला र २ सम्मेलन कार्यशालाहरू छन्। यसको आफ्नै सीएनसी प्रेसिजन मसिining उपकरण, पाँच-अक्ष मशीनिंग सेन्टर र 000००० डब्लू लेजर काटि la मेशिन छ।
कार्यशाला वातावरण स्वच्छ र सफा छ। त्यहाँ दिनहुँ सफा गर्न सफा छन्। अब कारखानामा धेरै मास्क मेशिनहरू छन् स्टकमा, जसले प्रायः ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। हामीसँग सुनिश्चित गर्न धेरै उत्पादन लाइनहरू छन् कि ग्राहकहरूले एक हप्तामा मास्क मेशीन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। हामी अनुकूलन पनि स्वीकार्छौं। अनुकूलित मास्क मेशिनहरू २० कार्य दिन भित्र पठाउन सकिन्छ।
ग्राहकहरु के भन्छन्?
उच्च गुणवत्ता, स्थिर गति, र धेरै राम्रोसँग काम गर्दै। यो मास्क बनाउनको लागि उत्तम विकल्प हो, हाम्रो लागि मान सिर्जना गर्नुहोस्। - दिमित्री
मैले मेशिन पाएँ, यसको प्याकेज एकदम राम्रो छ, जब म प्रयोग गर्न थाल्छु, यस कारखाना इञ्जिनियरले मलाई अझ राम्रो समर्थन दिन्छ, धेरै पेशेवर।
यो सौदा गर्न एक भयानक कम्पनी हो। मेरो सेवा प्रतिनिधि धैर्य थिए, मेरो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिए र सूचित र समयमै सल्लाह र सुझावहरू दिए। Umहम्फ्रे
यो मेरो फ्रिस्ट समय हो चीनबाट मेशीन किन्नको लागि, अन्य ग्राहकहरूको प्रतिक्रियाबाट उनीहरूले भने कि CHINESE सामान राम्रो छैन, तर म धेरै खुसी छु म HAOJING सँग भेट्न पाउँदा धेरै भाग्यशाली छु, तिनीहरूले मलाई प्राप्त गरे पछि मलाई उत्तम सेवा दिन्छन्। - हारुन
मेरो मसिing स्थापना गरिएको थियो र यसले गति प्रति मिनेट p०pcs मा काम गर्दछ र धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ, म फेरि एक सेट किन्ने योजना गर्दछु, मलाई खुशी पार्नुहोस्, धन्यवाद लाभ!! उमर
हामी उद्योग र व्यापार एकीकृत एक निर्माण र ट्रेडिंग कम्पनी हो। हाम्रो टीम ठूलो परिवार जस्तो छ। सबैको आ-आफ्नै कार्य जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो आफ्नै कर्पोरेट संस्कृति छ, जुन हामी सबैले छलफल गर्छौं। हरेक वर्ष हामीसँग टोली गतिविधिहरू छन् र विभिन्न स्थानहरूमा यात्रा। प्रत्येक महिना कर्मचारीहरु को लागी जन्मदिन कार्यक्रमहरु छन्, र हामी यस्तो खुशी र आराम वातावरणमा काम गर्दछौं। होईन मात्र, हामीसँग कडा व्यवस्थापन प्रणाली छ कि हामी अझ राम्ररी आफ्नो काम पूरा गर्न सक्दछौं र कम्पनीलाई अझ सुदृढ र बलियो बनाउन सक्छौं।